အစိုးရနှင့် နီးစပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး “မကြာခင် မွတ်စလင်မ်တွေ သွေးချောင်းစီးစရာ ရှိနေပါတယ်” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မြန်မာပြည်မှာ ပေါ်တင်ကြီး ဗလီတွေ မီးရှို့ ကု၇အာန်တွေမီးရှို့ လုပ်နေတာ ဘယ်သူမှ အသံ မထွက်ကြပါလား
I hereby request someone to AUDIT and punish Postlaju for taking about 10 days to deliver letters from KL to KL »
YYY မနေ့ညနေက ကျွန်တော့်ကို ပြောပြတာပါ။
ဖွရာလည်း မရောက်စေချင်ဘူးဗျာ … အားလုံး သတိကတော့ ပိုတယ်မရှိဘူးပေါ့လေ။
facebook wall ပေါ်မှာတော့ မတင်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် … ဒါပေမယ့် ဆရာတို့ကတော့ အဆက်အသွယ်တွေရှိတော့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာရှိရင် လုပ်နိုင်အောင် သတင်းပေးတာပါခင်ဗျာ။
Please read these>
Continue to read all here @ Wikipedia
The RESPONSIBILITY TO PROTECT (“RtoP” or “R2P”) isanew international security and human rights norm to address the international community’s failure to prevent and stop genocides, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.
*Intern with the ICRtoP*
UN must act to stop human rights abuses in Myanmar By Ian Holliday
Tags: Atrocity Crimes, General Assembly, Genocide, Responsibility to protect, United Nations, United Nations Security Council, United States, Wikipedia
This entry was posted on May 2, 2013 at 7:02 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.